प्रकाशन कसरी खोज्ने | JW.ORG मदत
अर्को भाषामा आफूले चाहेको सामग्री खोज्नुहोस्
मोबाइलमा JW.ORG चलाउनुहोस्
साङ्‌केतिक भाषासम्बन्धी विषयवस्तु खोज्नुहोस्
बाइबलको अध्ययन संस्करण प्रयोग गर्नुहोस्
अक्सर सोधिने प्रश्नहरू​​—⁠JW.ORG
jw.org को प्रकाशन भन्ने भागमा सयौं अडियो, भिडियो अनि डिजिटल सामग्रीहरू पाइन्छ। आफूलाई चाहिएको प्रकाशन फेला पार्न यस लेखमा दिइएको जानकारी हेर्नुहोस्।
प्रकाशनको शीर्षक टाइप गरेर आफूले खोजेको प्रकाशन प्राप्त गर्नुहोस्
पत्रिकाको अङ्‌क टाइप गरेर आफूले खोजेको पत्रिका प्राप्त गर्नुहोस्
आफूले चाहेको प्रकाशन कुन-कुन फरम्याटमा छ पत्ता लगाउनुहोस्
आफूले चाहेको विषय टाइप गरेर विषयसित सम्बन्धित प्रकाशन प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंले पढ्‌न खोज्नुभएको पुस्तक-पुस्तिकाको पूरा शीर्षक वा शीर्षकको केही भाग थाह छ भने तल भनेअनुसार गर्नुहोस्।
प्रकाशनहरू भन्ने भागमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पुस्तक र पुस्तिकाहरू भन्ने भागमा क्लिक गर्नुहोस्।
सबै सामग्री भन्ने बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईंले खोज्नुभएको पुस्तक वा पुस्तिकाको शीर्षकको कुनै शब्द टाइप गर्नुहोस्। जस्तै, बाइबलले सिकाउँछ किताब चाहिएको हो भने “सिकाउँछ” टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि शीर्षकमा “सिकाउँछ” भन्ने शब्द भएका प्रकाशनहरू मात्र बक्समा देखापर्छ। अनि आफूले जुन पुस्तक वा पुस्तिका खोजेको हो, त्यसमा क्लिक गरेर छान्नुहोस्।
त्यसपछि “खोज्ने” भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रकाशनहरू भन्ने भागमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पत्रिकाहरू भन्ने भागमा क्लिक हेर्नुहोस्।
क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईंले कम्प्युटर स्क्रीनमा ब्यूँझनुहोस्! र प्रहरीधरहरा (जन संस्करण) पत्रिकाका हालैका ४ वटा अङ्‌क देख्नुहुन्छ। साथै प्रहरीधरहरा (अध्ययन संस्करण) पत्रिकाको ८ वटा नयाँ अङ्‌क पनि देख्नुहुन्छ। (केही भाषाहरूमा यी प्रकाशनहरू उपलब्ध छैनन्‌।) तपाईंले खोज्नुभएको पत्रिका भेटाउन तलका सुझावहरू पछ्याउनुहोस्:
सबै पत्रिका भन्ने बक्समा क्लिक गरेर ब्यूँझनुहोस्! र प्रहरीधरहरा-मध्ये कुनचाहिं चाहिएको हो, त्यसमा क्लिक गरेर छान्नुहोस्। त्यसपछि हालै प्रकाशित भन्ने बक्समा क्लिक गरेर वर्ष छान्नुहोस्।
खोज्ने भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
कम्प्युटरको स्क्रिनमा पुस्तक-पुस्तिका अनि पत्रिकाहरूलाई दुई तरिकामा देखाउन सकिन्छ। दृश्य भन्ने बटनमा क्लिक गरेर ग्रिड वा सूचीमध्ये कस्तो तरिकाले पुस्तक-पुस्तिका अनि पत्रिकाहरू स्क्रिनमा हेर्न खोज्नुभएको हो, त्यो रोज्न सक्नुहुन्छ।
दृश्य बटनमा क्लिक गरेर ग्रिड रोज्नुभयो भने तपाईंले सबै प्रकाशनहरूको आवरण चित्र बायाँदेखि दायाँ एक एक लहरमा राखिएको देख्नुहुन्छ। सुरुमा यो पेज खोल्दा प्रकाशनहरू स्क्रिनमा यसरी नै देखिन्छ।
प्रकाशनको आवरण पृष्ठमुनि केही आइकनहरू देखिन्छ। प्रकाशन डाउनलोड गर्न PDF वा Epub फर्म्याटमध्ये एउटा रोज्नुहोस्। अडियो डाउनलोड गर्न MP3 वा AAC मध्ये कुनै एक रोज्नुहोस्।
दृश्य वटन फेरि क्लिक गरेर सूचि रोज्नुभयो भने सबै प्रकाशनहरू स्क्रिनमा माथिदेखि तलसम्म एक लहरमा देखिन्छ।
साथै प्रकाशनहरूको आवरण पृष्ठको दायाँपट्टि कुन-कुन फर्म्याटमा उक्त प्रकाशन डाउनलोड गर्न सकिन्छ, त्यो पनि देखिन्छ।
केही भाषाहरूमा कुनै कुनै प्रकाशन ठूलो अक्षरमा पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै PDF फर्म्याटमा प्रकाशन डाउनलोड गर्न चाहनुभएको हो भने, PDF आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा डाइलग बक्स देखापर्छ र त्यसमा नियमित, ठूलो अक्षर अथवा अरू कुन फर्म्याटमा फाइल डाउनलोड गर्न सकिन्छ, त्यो देखिन्छ। आफूलाई चाहिएको फर्म्याटमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्।
कुनै कुनै प्रकाशन डोउनलोड नगरीकनै कम्प्युटर स्क्रिनमै पढ्‌न सकिन्छ। हरेक पृष्ठको सबैभन्दा माथि दायाँपट्टि खोज्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा आफूले चाहेको शब्द वा पदावली टाइप गरेर सम्बन्धित लेख वा अध्याय खोज्नुहोस्। (हाल यो सुविधा नेपाली भाषामा उपलब्ध छैन।)
तपाईंलाई प्रकाशनमा भएको कुनै मुख्य शब्द अथवा पदावली याद छ र त्यही प्रकाशन भेटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो शब्द/पदावली टाइप गर्नुहोस्। तपाईंले टाइप गर्नुभएको शब्द/पदावली भएको लेख वा अध्याय सबै स्क्रिनमा देखा पर्नेछ।
तर तपाईंले त्यो शब्द वा पदावली भएका लेखहरू मात्र खोज्नुभएको हो भने यसो गर्नुहोस्:
एड्‌भान्स सर्च वा एडभान्स अप्सन्स-मा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याटेगोरी अन्तर्गत प्रकाशन बक्समा चिन्ह लगाउनुहोस्।